समाज Archives - Page 179 of 255 - Dna Nepal
पोखरा नयाँबजारमा एक पुरुष मृत फेला ! १२ आश्विन २०७५, शुक्रबार ०२:३७
पोखरा, असोज १२ । पोखराको नयाँबजारमा फोटोकपी पसल सञ्चालन गर्दै आएका भीम चन्द मृत भेटिएका छन् । अन्दाजी ४० बर्षका चन्द लामो समयदेखि नयाँबजारमा फोटोकपी मेसिन चलाउदै आएका थिए । चन्दले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने स्थानीयले बताएका छन् । उनको श्रीमति,..
गुल्मी, असोज १२ । राज्यका उच्च अहोदामा पुगेका नेता अधिकारीले गाडी र चालक सुविधा पनि लिने गरेको नौलो होईन । तर, गुल्मी ईस्मा गाउँपालिका २ का अध्यक्ष टीका रेश्मीले भने मोटरसाईकल चालक सुविधा लिएका छन् । उनले दैनिक कार्यसम्पादनका लागि मोटरसाईकल..
घरमै खेलिरहेकी ५ बर्षीया बालिकालाई कर्मचारीले गरे बलात्कार
काठमाण्डौं, असोज १२ । तामाकोशी गाउँपालिकाकी ५ बर्षीया बालिका बलात्कार गरी फरार रहेका खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी कमल बजगाई पक्राउ परेका छन् । २१ भदौमा घरमै खेलिरहेकी बालिका बलात्कार गरेर बजगाई फरार भएका थिए । जिल्ला प्रहरी..
संखुवासभा, असोज १२ । संखुवासभामा जबर्जस्ती करणीको आरोपमा दुई जना प्रहरी निलम्वित भएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय आँखीभुईमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक धनराज खतिवडा र इलाका प्रहरी कार्यालय हेदाङ्नामा कार्यरत प्रहरी जवान मिक्मा शेर्पा..
रक्सीको झोंकमा ढुंगाले बजाए, रन्थनिएकी श्रीमतिलाई पानी खुवाए र बचाउन नसकेपछि भागे ११ आश्विन २०७५, बिहीबार ११:४७
पोखरा, असोज ११ । आँफैले मारेकी श्रीमतिको पनि मायाँ ? पोखरामा बुधबार यस्तै घटना भयो । रक्सी पिएर राति ढिलो घर पुगेपछि श्रीमतिले गाली गरिन यान बहादुर गुरुङलाई । रक्सीले टिल परेका यानबहादुरले नजिकैको लोहोरो उचालेर श्रीमतिको टाउकामा बजाईदिए..
यानबहादुरले किन गरे श्रीमतिको हत्या ?
पोखरा, असोज ११ । यानबहादुर बुधबार राती ढिलो गरी घर फर्किए । रक्सीले टिल परेर घर आएका उनलाई श्रीमतिले किन ढिलो आएको भनेर गाली गरिन् । यानबहादुर झोकिए र ढुंगाले टाउकामा बजाईदिए । घटना राती साढे ९ बजेपछि भएको हो । सँधैजसो रक्सी पिएर घर आउने..
अपडेट–पोखरामा श्रीमतिको हत्या गरेर भागेका श्रीमान् पक्राउ
पोखरा, असोज ११ । पोखरा ३२ खोलाको छेउमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा श्रीमातीको हत्या गरेर फरार भएका श्रीमान पक्राउ परेका छन् । बुधबार राती घरमै श्रीमतिको हत्या गरेर उनी भागेका थिए । विहानैदेखि घटनास्थल पुगेको संघीय इकाई प्रहरी र जिल्ला प्रहरी..
पोखरामा श्रीमानले मारे आफ्नै श्रीमति
पोखरा, असोज ११ । पोखरा ३२ खोलाको छेउमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा श्रीमानले आफ्नै श्रीमतिको हत्या गरेका छन् । बुधबार साँझ ५५ बर्षिय यानबहादुर गुरुङले आफ्नै श्रीमति ६० बर्षिया श्रीमाया गुरुङको हत्या गरेका हुन् । हत्या गरेपछि बोरामा पोको पारेर..
दुई जेठाजुको हर्कतः बारम्बार बलात्कार गरेको बुहारीको खुलासा
धादिङ, असोज ११ । बुहारी बलात्कार गरेको रोपमा दुई जेठाजु पक्राउ परेका छन । जिल्लाको थाक्रे गाउँपालिका ११ की २२ बर्षीया बुहारीलार्ई बारम्बार बलात्कार गरेको अरोपमा ३५ बर्षीय र २९ बर्षीय दुई जेठाजुलार्ई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । आफुलाई दुई..
पोखराको गगनगौंडामा महिला मृत फेला !
पोखरा, असोज ११ । पोखराको गगनगौंडामा महिलाको शव भेटिएको छ । बोरामा पोको पारेको अवस्थामा शव भेटिएको स्थानीयले बताएका छन् । प्रहरी घटनास्थलतर्फ जाँदैछ । श्रीमान्ले मारेर फालेको हुनसक्ने आशंका छ । घटनापछि श्रीमान् बेपत्ता छन् । घटना विवरण..